मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली, दाहालसँग परामर्श ! – Sudarshan Khabar
मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली, दाहालसँग परामर्श !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रिक्त रहेका मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गर्नेगरि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आन्तरिक परामर्श अघि बढाएका हुन । आजमात्रै अध्यक्षद्धयबीच यसबारेमा छलफल भएको नेकपानिकट स्रोतले जनाएको छ ।
अहिले अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय ओली आफैंले सञ्चालन गरिरहेका छन् । युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि ओलीले अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व आँफैले गरिरहेका छन् । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले पनि शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास मन्त्रालयमा ओलीले मन्त्रीको रुपमा नयाँ अनुहार ल्याउनेगरि तयारी थालेका छन् ।
क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसँग परामर्श गरेका हुन् । यसअघि मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनको चर्चा चलेको थियो । तर, ओलीले तत्काल मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन नहुने कुरा पत्रकार ऋषि धमलासँग प्राईम टाईम्स टिभीको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्पष्ट पारिसकेका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीहरुपनि अर्को चुनाव नभएसम्म परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
ओली र दाहालबीचको सहमतिअनुसार नै तत्काल मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन नहुने नेकपा स्रोतको दाबी छ । तर, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले भने मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनमा जोड दिँदै आएका छन् । ओलीले भने आफूले यसबारेमा सोचेको भएपनि तत्काल पूनर्गठन नहुने जवाफ दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठक भोलि बस्दैछ । सम्भवतः भोलिको बैठकमा नै ओलीले तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्ने र सरकारको प्रवक्तासमेत चयन गर्ने बुझिएको छ।
भोलि नै नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ । यसअघि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानको लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर भोलिको बैठक औपचारिकताका लागि मात्रै बस्ने बुझिएको छ। बैठक बढिमा दुई दिनसम्म मात्रै चल्ने र धेरै नलम्बिने बुझिएको छ ।